. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: ရောင့်ရဲခြင်း
ရေးသားသူ မိုးခါး at 11/24/2010 12:41:00 AM
အောင်မြတ်လေးဟ ငါက စာကောင်းပေကောင်းလား ဆိုပြီး ကမန်းကတန်းလာဖတ်ပါတယ် . . . ခေတ်မှီတိုးတက်နေသော နိင်ငံတော်ကြီးနဲ့ လာတိုးနေပါလားနော်း)))))))
သည်းခံခြင်း၊ရောင့်ရဲခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ အမျက်ဒေါသကို သိုဝှက်ထိမ်းချုပ်ထားရခြင်း....ခြင်း.....ခြင်း..........ခြင်း.........တို့ဖြင့် ပြည့်စုံအပ်သော ရွှေပြည်ကြီးမှာ...ကုသိုလ်တရားတွေ ရကြောင်းအထောက်အပံ့တည်းဟူ၍ ဂဏှာဟိမှတ်ပါလေကုန်......
သည်းခံနိုင်ခြင်းသည် မင်္ဂလာဖြစ်၏။ ရောင့်ရဲနိုင်ခြင်းသည် မင်္ဂလာဖြစ်၏။ :P
သူများနိုင်ငံတွေမှာလေ ဖယောင်းတိုင်မီးကို တကူးတက ထွန်းပြီး ရိုမန်တစ် လုပ်ကြတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ပိုပြီး ရို ဖြစ်တာပေါ့နော့။
ဒီနေ့ -ွမ်း မဝယ်ပဲ ဖယောင်းတိုင် ဝယ်ပြန်ခဲ့မယ် နော့...
အနာဂတ် မှာ ...
Marina Bay လှတာ လောက်တာတော့
ဗိုလ်တထောင် ဆိပ်ကမ်း ကို
မှီမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. >>
သူတို့တွေ သူများနိုင်ငံ က
တစ်နိုင်ငံလုံး RO ရေနဲ့
မချိုးနိုင်ဘူးလို့ ပြောနိုင်လား .. :D
၂၀၁၅ ဒီမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး
၂၀၅၁ မှာ ရွှေနိုင်ငံလည်း
၀ါယာလပ်စ် ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမှာပေါ့ .. ;))
ဖုန်း ..လား ..
ဟဲ ဟဲ ..
ပျင်းတောင် ပျင်းသေးးး ... :D
ကျွန်တော်တို့နိူင်ငံသားအားလုံးကတော့ 
သည်းခံခြင်းတရား နဲ့ရောင့် ရဲခြင်းတရား တို့ ကတော့ 
ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ပါပဲဗျာ။
မကောင်းလို့ ကလဲ ရမှမရပဲ ..
ဒီတော့ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်၊ဖြစ်အောင်..
ရ တာလေးနဲ့ လဲ ဝ အောင်၊ လှအောင်..
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို တထောင့်တနေရာက ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်ပေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါဗျာ။ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ :D
မီးမလာတဲ့ဒုက္ခအပြင် မီးလာတဲ့ ဒုက္ခလည်း ရှိသေးတယ်။ မီးလာပြန်တော့လဲ မီးအားမြှင့်စက် မိုင်ကုန်ဖွင့်တင်ရတော့ မီးဆောင့်တက်တိုင်း မီးအားမြှင့်စက် alam က တဂွီဂွီ တဂွမ်ဂွမ်။ အနားမှာ တစ်ယောက်က တချိန်လုံးရှိနေရတယ်။ ရယ်အားထက် ငိုအားသန်ရတာက မီးလာချိန် လူတွေ အနားမနေရဘူး။ မီးအားမြှင့်စက်နား ကင်းစောင့်နေရတယ်.။
အမယ် .. အထင်မသေးနဲ့နော်... လွယ်တယ်များအောက်မေ့နေသလား...
November 28, 2010 4:22 AM
December 22, 2010 3:51 AM
January 06, 2011 5:34 PM